Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အောက်လွှတ်တော်ကအသံများ
Writer Sein Lyan Time 8:09 am
မေးမလို့၊ ထန်းမြစ်က ဘယ်လောက်ကြီးလဲ? ပုဆိုးမဝတ်တတ်ဘူးလား?
ဦးဆုံး မန့်ရမယ်ဆိုလို့နော်? စိန် ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
သြော် .. ရှုစရာရှားလို့နော် .. :P
ဟားဟား..... ဒီလိုကိုး....... အူးအူးဖွတ်ချိန် တို့က
ယုတ်ချင်ယိုက်ချားယို့ ရဘီ..အဲဒီကျ ဇာတ်ကားနာမည်ကို
တထာက ရူခဲ့ဘူးသော...ပိ..ပီ...ပီးး ဟီးးး :P
လူတွေ ယုံအပြည့် ရာအားပေးမှာ ကျိန်းတေဒယ်.... ဟတ်ဟတ်
ကိုယ် ငါးတန်းတုန်းက စာမေးပွဲခန်းထဲ သံရှည်ဆွဲပီး ပီမိတာ စောင်းရေးထားသလား ထင်ရတယ်။
*ရှက်တတ်ပါတယ် ဆိုမှာ ငါ့နှယ်ဏော်* လို့ ရုပ်တည်နဲ့ စာဆက်ဖြေရတယ်။
အတြုန်းကတော့ ရယ်နိုင်ဘူး။ ခုတော့ ရယ်စရာပေါ့ဗျာ။
အပေါ်က ရေကျတယ်ဆိုတာလဲ ဖိုးစိန်ပေါ်ကို မဟုတ်လား.. မှန်မှန်ပြော...
အိပ်ငိုက်လို့ဘလော့လျှောက်လည်ထွက်လာတာ
အီးရှုတဲ့ ကိုဖိုးစိန် နဲ့သွားတွေ့ တယ် အဟတ်
ရေဖူးမှောက်လို့ ရေခံတဲ့သူလည်း ရှိသေးတယ် ဟားဟား
ဘကြီးဖိုးစိန်ရာ ထန်းမြစ်ကို ထဲ့စရာ နေရာရှားလို့ 
အဟား တော်တော်ရီရတယ်ဗျာ အဲ ပီ.. ပီ... အသံတောင် ထွက်သွားတယ် အဟဲ ထန်းမြစ်ကတော့ ကြောက်စရာ ကျနော်တုန်းကတော့ စာမေးပွဲဖြေတာ ဘာမှ မယူသွားပါဘူးဗျာ... သူတို့တွေကတော့ ယတြာတွေ စုံလို့
ဟား ဟား အောက်လွှတ်တော်က အသံများ ဆိုတော့ ကွန်ဂရက်တို့ ၊ အမတ်တို့ လားလို့ လေ။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ ပီပီ အကြောင်း ဖြစ်နေသကိုး။ တကယ်ရီရတယ်။
ဖိုးစိန်က မစ္စတာအူရှီိး ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့... :P
(အော် ထားခဲ့တဲ မတ်စေ့လေး ဇက်ဆီလည်းပို့လိုက်တယ်နော် :P)
ဖိုးစိန်ရယ်.. အောက်လွှတ်တော် ဆိုလို့ ဘာများလဲလို့
တော်တောက် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ မှတ်သားထားတုန်းနော်။ ဖိုးစိန်ရှေ့မှာနေရင် သတိထားကြပါကုန်သော်....
ကိုစိန်ပေါ် ကို မှတ်လား
အခင်းဖြစ်ပွါးချိန်မှာ ကို ဖိုးစိန် ဘယ်နှစ်လုံးတိတိ ရှုလိုက် မိပါသလဲ...။
ဒွေးကြော်ငြာတဲ့ ရေးမွှေး လေးကို သတိရမိတယ်..
“ကမ္ဘာကျော် တန်ဘိုးကြီးရေမွှေးတွေ အနံ့နဲ့တထပ်ထဲပဲ”
(အဲဒီလို အဖြစ် အပျက်ကျွန်တော့်မှာလဲ ရှိတယ်ဗျ..
အဲဒီနှစ်က ဆယ်တန်းကို P ဘယ်နှစ်လုံးနဲ့... အဲယောင်လို့... D ဘယ်နှစ်လုံးနဲ့ အောင်မြင်တော် မူခဲ့ပါသလဲ ကွယ် ။။ PP.. P. P. P ... ppp .. pp . p...
Monsieur et madame Pho Sein ရေ
ကော်မန့် ရေးတဲ့လူကလည်း ထန်းမြစ်ဘယ်လောက်ကြီးလည်းဆိုပဲ
ဒီလိုမှန်းသိရင် အစောကတည်းက မုန်လာဥ ခပ်ကြီးကြီးလေးကို ထည့်သွားရမှာ ထင်ခံရနည်းလားနော်
လိုင်းလေးကောင်းလို့ လာရတာ ခုတစ်လော လိုင်းမကောင်းဘူး အကိုရ
အိပ်ချိန် အခုမှမနက် ၅း၀၀ရှိသေးတယ်ဖတ်သွာူပြီ
း)))) ဖိုးစိန်တို့ကတော့ ရိုက်ပေါက်.
အစ်မဆိုလည်း အရမ်းရယ်ချင်ရင် မအောင့်နိုင်ဘူး။
ရယ်ရတယ် တကယ်. ဆိုးလိုက်တဲ့ ဖိုးစိန်.. ငါ့ကိုလဲ
အော် ရှူတဲ့သူ တောင် ဖြစ်သွားရသေးတယ်။ :D
မိုက်တယ် ကြိုက်တယ် တယ် ပို့စ်ကိုနော်
ကိုဖိုးစိန်ရယ်.. လုပ်လိုက်မှဖြင့်.. ဟားဟားဟား.. အူကိုနှိပ်နေတာပဲ.. ဟီးဟီး
ဟင့် မနက်ကတည်းကပြောဝူး ။ ခုမှပြောတရ် ကျေနပ်ဘူး ။ လုံးဝ(လုံးဝ) ကိုမကျေနပ်ဘူး ။ loney ဖြစ်နေတဲ့ညီ့ကိုပစ်ထားတရ် ။း( ကေကေလေ ။ နောက်ကို ဘယ်တော့မှ တစ်မမန့်တော့ဝူး ။ ဟင့်ဟင့်ဟင့် ။ နောက်မပြောရင် ဒီ့ထက်ပိုရှူရပါစေ ။ ဟိဟိဟိ ။ စတာနော့် ။ ဒါပဲအစ်ကိုရား( သွားတော့မယ် တာ့တာ ။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကွာဒီနေ့စောစောကတင်မုံလာဥအုကြောင်းပြောနေကြတာမင်းလေးကမန်လာဥ post တင်လာတယ် မင်းေ၇းတဲ့pppp pဆိုတာဒို့ ဗမာပြည် ကမော်တော်ယဉ်ထိမ်း ရဲကိုပြောတာလား ကြုံကြံဖန်ဖန်ညီလေးရာရေးလဲရေးတတ်ပါ့မင်းpost ကိုဖတ်ရင်းရီရလွန်းလို့မနေနိုင်တော့ post ဖတ်တာ ခဏနားပြီးဘုရားခန်းထဲသွားထိုင်ပြီးအာရုံပြောင်းတာ အရှေ့ ကကောင်မလေးနဲ့ ဘေးကသကောင့် သားနဲ့ မင်း ပုံတွေအာရုံထဲပေ့ါ်လာပြီးဘုရားရှေ့ တယောက်ထဲအားပါးတရထိုင်ရီပြီးထပြန်ခဲ့ ရတယ် တော်တော်ဆိုးတဲ့ဖိုးစိန်
:)) ရယ်သွားတယ်ဗျို့။ တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ဖီလစ်ပိုင်သူငယ်ချင်းတွေကို ဘာသာပြန်ပြရင်းကို တူတူဝိုင်းရယ်ကြတာ။ သူတို့ကလဲ ရယ်ရကြောင်းလေး ပြောပေးပါတဲ့။။
ခုမှလာလို့ ရွှေစိတ်ကောက်တော်မမူနဲ့ မနက်တည်းက ဖတ်ပြီးသား .. နောက်တစ်ခေါက် နောက်တစ်ခေါက် ..
ပြုံးချင်တိုင်းဖတ် ရီချင်တိုင်း မှတ်လို့ရအောင် ချိန်ခါနှောင့်နှေး စိတ်မှာတွေးလို့ နောက်ပြန်တစ်ခေါက်ဖတ်မိသည် ...
အဟီး ... ပြန်တော့မယ်နော် .. ရီရလွန်းလို့ ဒီမှာထွက်တော့မယ် ... ဘယ်လိုလဲ ... ဒီမှာပဲ သွားလိုက်ရမလား :D
ဟီဟိ... ခွီခွိ... :-)
ဝေးး မန့်တာ ငါ ဘိတ်ချေးကွ။ အဟဲ။ မနေ့က ညကတည်းက 15mins ago ဆိုကတည်းက အီဖေကိုက ဖတ်ပြီးသား။ အရမ်းရီပြီး အရမ်းအိပ်ချင်သွားလို့ အိပ်ပလိုက်တာ။ ခုတော့ ဘိတ်တဲ့။ အဟိ။
အေးလေ ဒါလဲ နိုင်ငံရေးပါပဲ
ဟိုတစ်ယောက်ကလည်းဘယ် ကတည်းက ညှိုးထား လည်းမသိဘူး... ခြောက်နှစ်ကြာတာတောင်မှတ်မိတယ်
ကောင်လေးက စာလေး ကြိုးစားချင်ပါရက်နဲ့ သူများကို နောက်ချင်စိတ်က များနေတယ်။ :'D